UKristian von Sponneck | Iqela leBoxen247 | Indawo yase-Europe yeNombolo ye-1
Iqela leBoxen247 elikulethela iindaba zamanqindi zamva nje kwihlabathi liphela kunye neziphumo ezivela kwihlabathi liphela.
Igama lam ndinguKristian von Sponneck kwaye ndingumbhali wamanqindi osisigxina ofumanekayo wokubhala umdlalo wamanqindi ozimeleyo, ukunika ingxelo okanye ukwenziwa kwekhamera.
Zive ukhululekile ukunxibelelana nam kwiLinked in (cofa eli khonkco lingezantsi ukukusa kwiphepha lam le-LinkedIn).
Ukusukela ebutsheni bam ndathandana nomdlalo wamanqindi, ndakuba nethamsanqa ngokwaneleyo ukubamba umsebenzi kaMuhammad Ali (ngokuchasene noLarry Holmes ngo-1980), ndawela kwangoko kwezemidlalo. Bendihlukane nobomi bam ixesha elide, kunye nomdlalo wonxibelelwano endinomdla kuwo kuphela.
Ukubhala ngomnqweno wakho kungowona msebenzi ungcono nabani na anokuwenza ebomini, yeyam le. Umbhali-mbali onobunzima obuzinzileyo obunobutyebi bolwazi olubuyela umva ixesha elide, ndiceba ukubhala incwadi ngembali yabasindayo, ukusuka kwimbono eyahlukileyo kwesiqhelo.
Ngobukho nje obuncinci beendaba zosasazo, ndithanda ukuthumela zonke iindaba zamanqindi kwiBoxen247.com Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest kunye neLinkedIn. Ngaphandle kwe-LinkedIn, andizibandakanyi kwezi ziqonga (ngakumbi i-Twitter), ndithumela ngokubanzi ndishiya iqonga ngokubhekisele kwinto enobungozi eyenzekayo. Andinamnqweno wokuzibandakanya naloo msebenzi.
Ndinemvelaphi ebanzi kwiFrench Boxing (Savate). Ngelixa uSavate ehlukile kumdlalo wamanqindi, kuninzi crossover enezinto ezininzi zomdlalo wamanqindi wesiko. Ndisebenzisa olu lwazi xa ndophula umlo kwaye ngaphakathi kokubhala kwam.
Khumbula ukuphonononga ngokupheleleyo iwebhusayithi yethu yamanqindi. Ineendaba zamanqindi zamva nje, iziphumo zomdlalo wamanqindi kunye nomxholo wamanqindi omninzi owongezwa mihla le, ngomndilili ophakathi kwezithuba ezili-10 ukuya ku-26 ngosuku.